Kameleoon: Masinina AI handinihana ny mety hisian'ny fiovan'ny mpitsidika | Martech Zone
Alakamisy Oktobra Oktobra 1, 2020 Alakamisy Oktobra Oktobra 1, 2020 Douglas Karr
Kameleoon dia sehatra tokana ho an'ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po (CRO) manomboka amin'ny fanandramana A / B sy ny fanatsarana ka hatramin'ny personalization amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy. Ny algorithman'i Kameleoon izay mianatra amin'ny milina dia manisa ny mety ho fiovam-po isaky ny mpitsidika (fantatra na tsy fantatra anarana, mpanjifa na antenaina) amin'ny fotoana tena izy, maminavina ny fividianana na ny fikasan'izy ireo.
Kameleoon Fanandramana sy sehatra fanatontoloana
Kameleoon dia tranonkala mahery sy feno stack fanandramana ary personalization sehatra ho an'ny tompona vokatra nomerika sy mpivarotra te hampitombo ny fiovam-po ary handroaka ny fitomboan'ny vola miditra amin'ny Internet. Miaraka amin'ny fisehoan-javatra ao anatin'izany ny fanandramana A / B, ny fizarazaran'ireo mpampiasa, ny tanjon'ny fitondran-tena ary ny angon-drakitra maharitra, ny Kameleoon dia manampy ny orinasa hampitombo ny fiovam-po an-tserasera sy hampitombo ny vola miditra.
Forrester dia nanao dinidinika lalina niaraka tamin'ny mpanjifa Kameleoon marobe manerana ny indostria ao anatin'izany ny e-varotra, ny dia, ny fiara ary ny fivarotana antsinjarany momba ny valiny novinavinaina.
Kameleoon tombontsoa voafaritra nandritra ny telo taona dia misy:
Hatramin'ny Fanatsarana 15% ny tahan'ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpitsidika amin'ny Internet sy ny fanatontosana ireo fifandraisana amin'ny fanatsarana ny fanovana. Izy io dia maneho tombony telo-taona namboarina ho 5,056,364 XNUMX XNUMX XNUMX amin'ny sanda ankehitriny.
Hatramin'ny Fiakarana 30% amin'ny fifanakalozana cross-sell, miaraka amin'ny fanadihadian'i Kameleoon momba ny fitondran-tena sy mifototra amin'ny kontekstika izay ahafahan'ny marika hampitombo ny isan'ny fampielezana fivarotana an-tsokosoko mahomby. Izy io dia maneho tombony telo-taona voaangona mandritra ny telo taona, 577,728 $.
49% fihenan'ny ezaka fananganana fampielezan-kevitra. Ny fahaizan'i Kameleoon manana ny heriny manokana AI ary ny fizarana mavesatra ny fivezivezena amin'ny tranokala ho an'ny siny fitadiavam-bola dia mampihena be ny fotoana ilaina hananganana fampielezan-kevitra sy famolavolana traikefa an-tranonkala sy fifandraisana, sady mampitombo ny fizakan-tena ataon'ny mpivarotra amin'ny interface interface intuitive sy friendly. Maneho tombony amin'ny $ 157,898 amin'ny sanda ankehitriny mandritra ny telo taona.
Ho fanampin'izany, ireo mpanjifa dia nanondro ireto tombontsoa tsy voamarina manaraka ireto:
Fanatsarana ny fanatsarana ny mpanjifa (CX) - Amin'ny alàlan'ny famelana ny fandefasana atiny sy hafatra mifanaraka aminy, Kameleoon dia mamela ireo fikambanana hanome traikefa manokana sy manokana.
Fampitomboana traikefa ho an'ny mpiasa (EX) - Mahatsiaro ho matanjaka kokoa ny mpampiasa satria afaka manova sy fanitsiana tsotra amin'ny resaka minitra izy ireo, noho izany mahatsiaro ho mihetsika sy mahazaka kokoa - ary manome tanjaka bebe kokoa amin'ny asany.
Ny fanolorana traikefa nomerika namboarina manokana dia ivon'ny fahombiazan'ny orinasa - miaraka amin'ny areti-mifindra dia manafaingana ny filan'ny marika hifantoka amin'ny fanandramana sy ny personalization. Ity fandalinana ity sy ny fanadihadian'i Forrester dia mampiseho ny fomba hanohanan'ny Kameleoon ny mpanjifan'ny orinasa amin'ny tontolo mifaninana sy nomerika voalohany, manome ROI haingana ary tombony ara-bola maharitra. ”
Alohan'ny hampiasana an'i Kameleoon, ny orinasan'ny mpanjifa dia tsy nanana fahaiza-manao manokana na nampiasa sehatra fitiliana A / B izay tsy nanana motera vinavina sy isa fanaovana propensity. Nahatsapa izy ireo fa tsy manana fahaizana mampitombo ny tahan'ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny famelana ny famolavolana traikefa amin'ny tranonkala kendrena.
Orinasa lehibe maherin'ny 450 no miantehitra amin'ny Kameleoon, ka nahatonga azy io ho sehatra ambony SaaS ho an'ny fanatontoloana tarihin'ny AI any Eropa. Anisan'izany ireo mpitarika ecommerce sy retail (Lidl, Cdiscount, Papier), media (Mumsnet, L'Equipe, Axel Springer), fitsangatsanganana (SNCF, Campanile, Accor), fiara fiara (Toyota, Renault, Kia), serivisy ara-bola (Axa, AG2R, Credit Agricole) ary ny fahasalamana (Providence). Kameleoon dia mahatratra fitomboana isa telo isan-taona amin'ny mpanjifa sy ny vola miditra.
Mangataha Demo Kameleoon
Tags: ab testingaipersonalization entin'ny aifizarana tarihin'ny aiAnalyticsfahaizana artifisialymety ho fiovam-poCrokameleoonkcspersonalizationkilalaon'afo